Ezohwebo: I-Afrika seyiphenduke insengakwazi - Bayede News
KUWO wonke amagumbi amane omhlaba muva nje kunempikiswano enkulu mayelana nesenzo seChina sokubeka etafuleni indathane yemali nethe iyisabelo samazwe ase-Afrika. Ngokwezibalo ezisemthethweni lemali esigidinikhulu ezingama 350 wamadola ase Melika. Akuqali ukuﬁka amasoka lapha e-Afrika azibike kepha okwenziwe yiChina kwehlukile nxa ukubukela kude, bese kuba ngokunye nxa ususondela. Umgomo waleli lizwe ngothi alingeni ezindabeni zezwe noma amazwe elihweba nawo. Lokhu kwehluke kakhulu kunalokho okwenziwa yi-United State of America (USA) okuthi uma itshale imali yayo yeluse ukuthi uhulumeni loyo uqhuba kanjani kakhulu nxa kuﬁka kupolitiki nepolitiki yezomnotho.
Imibono iyehluka ngomgomo weChina ngoba abanye bayisola ngokuthi ngenxa yalo mgomo ishaya indiva ohulumeni nabaholi abahlukumeza abantu kokunye besebenzisa imali abayinikwe yiChina. Odabeni lokuthi ayingeneleli kukhona abakuphikayo lokho ngoba iChina icasuka iphimise uma amanye amazwe enobudlelwano nayo eseka iTaiwan noma umzabalazo oholwa yiDalai Lama. Lokhu kubukeka njengokugxambukela. Nanoma yiliphi izwe ongabe aliyifuni iChina, liyazi nokho ukuthi leli lizwe seliphenduke umgogodla womhlaba wonke. Ngenxa nje yenqwaba yabantu bakhona, yisivinini umnotho wakhona okhula ngayo kanye nemali eyizindodla etholakala kuleli lizwe. Kuyo le ngosi sike sabheka ukuthi ngisho i-USA ikweleta iChina izizumbulu zezimali, okwenza kungabilula ku-USA ukwenza noma yikanjani kwazise amandla maduzane nje asezoshintshana kwezobukhondlakhondla.
Ngokwezibalo zakamuva zitshengisa ukuthi iChina uma iqhathaniswa nesikhondlakhondla somhlaba okuyi-USA ilandela ezithendeni ngokwamandla omnotho. Izibalo ngokweWorld Economic Forum zithi i-USA ngokweGross Domesic Products (GDP) inosigidintathu oli-$19.39 besekuthi iPPP inosigidintathu oli-$19.39, okanti iChina ineGDP engusigidintathu oli-$12. kanti iPPP ime kusigidintathu ongama-$23.15 lokhu okutshengisa ukuyedlula kude le i-USA ngamandla okuthenga. Izinkomba zithi eminyakeni emihlanu ezayo, la mazwe azobe esecishe abambane izithonto ngomnotho ozobe ucishe ulingane ngokweGDP, lapho iChina izobe inama-$21.57 osigidintathu kuthi i-USA ibe nama-$24.53 bosigidintathu, kanti iPPP yaseChina izobe ingaphezu kwama- $30 osigintathu kuthi eye- USA indonda cishe ilingana nayo iGDP yakhona.
Onke amanye amazwe angabalangwa kuhlonzwe ukuthi azobe enakho ukukhula ngokwalolu luhla olungaphansi, kepha wonke azobe ebheke ezweni elikhula kakhulu nelizothathwa njengesikhondlakhondla sakusasa, iChina. Yingakho kulabo abakhumbulayo ngesikhathi sikaMengameli uMbeki, lowo owabe engungqongqoshe wezangaphandle uMnu uPalo Jordan kwathi ngesikhathi sesiphithiphithi sokuza kweDalai Lama, ungqongqoshe wakubeka kwacaca ukuthi iNingizimu Afrika kayifuni ukuphambana nemigomo yeChina ivumele iDalai Lama ingene eNingizimu Afrika nxa iChina esisebenzisana nayo icela ukuthi ingavunyelwa. Ngale kokuhlulela, lokhu kukhomba itwetwe amazwe amaningi analo ngokudlondlobala kweChina kupolitiki nezomnotho.
Lukhulu olubhekiwe emkhakheni wezimbiwa
Izizathu ezimqoka Zine izinto okumele masizibheke maqondana nezinkonondo ezivelayo ngemali iChina eyiboleka i-Afrika, okukuqala ukuthi la mazwe aseNtshonalanga anomgolo maqondana ne-Afrika ebebekade beyiqhoqhobele beyiklinyile ngezezimali. Nxa sekuvela imbangi efana neChina okungelula ukuyikhipha esibayeni, sekukhona nokuyinyundela ekuthenini izocindezela i-Afrika. Okwesibili, indlela izivumelwano ezihambisana nale mali okumele abaholi be-Afrika bazisingathe ngayo. Kumele kucace bha ukuthi iyimalini inzalo ezokhokhwa yila mazwe aboleka le mali eChina. Okwesithathu ama- Afrika angenakho ukwethemba ubuholi babo ngenxa yokwazi ukuthi abaningi babaholi base- Afrika bangogombela kwesabo, kunokuthi lemali engaka isize amazwe ase-Afrika, okungase kwenzeke ukuthi ingagcina ingene emaphaketheni abo laba baholi njengalokhu kuhlezi kwenzeka.
Okwesine nxa iChina ifaka le mali, ama-Afrika asenokungayethembi neze iChina ngezizathu ezifana nokuthi nxa kufanele inikezele ngemali ifaka imibandela eminingi ehambisana nokuthi osonkontileka abazohlela, bakhe baphinde balungise ingqalasizinda yase- Afrika kusuke kuChina uqobo. Lokhu okwenza ama-Afrika abone ukuthi le mali kahle hle ayiqondile ukuzosiza ama- Afrika. Kuleli phuzu lokugcina, lokhu kuyobe kungekusha, njengalokhu kubalulekile ukuthi sikhumbule ukuthi izinhlangano zaseNtshonalanga nazo bezisebenza kanjalo, ziletha izinkapani zazo ukuthi zenze imisebenzi besekuthi izinkampani zasekhaya zicoshe imvuthuluka. ENingizimu Afrika ikakhulukazi, kufanele uHulumeni avezele izakhamuzi ukuthi ithini imibandela yalezi zimali ngaphambi kokuthi ziqale zisetshenziswe. Izimali ezisuke zifakwe ezinkampanini zikaHulumeni ezifana no- Eskom, iTransnet nezinye, zisuke zizokhokhela isikweletu iminyaka eminingi ezayo, cishe kuye ezizukulwaneni ezingakazalwa. Ngakho uHulumeni akangacabangeli esiswini, kepha acabangele izizukulwane ezingagcina seziphenduke izigqila zamaShayina kuyimanje ama-Afrika aseyizigqila zamazwe aseNtshonalanga ngokwezikweletu nenzalo engangezintaba.
nguGugulethu Xaba Sep 20, 2018